प्रदेश सरकार कहाँ हरायो भन्नेहरुलाई मन्त्री सुबेदीको प्रतिप्रश्न- सिमानाकामा नागरिकको उद्दार गर्ने काम प्रदेश सरकार बाहेक कसले गरेको छ ? (भिडियो)
धनगढी -कोरोना रोकथामको लागी नेपाल भारतमा लकडाउन भएपछि भारतमा अलपत्र मजदुरहरुको उदार भएन भने सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारको ब्यापक आलोचना भयो । सिमा नजिक पुग्नेहरुलाई सरकारले २-३ पटक कहिले २ सय नागरिक त कहिले ४ गरेर नेपाल भित्र प्रबेश गरायो । त्यसपछि पनि त्यो क्रम रोकिएन र भारतमा रहेकाहरुलाई नेपाल ल्याउनु पर्ने ब्यापक दबाब सरकारलाई पर्‍यो ।
यदपी सिमामा प्रबेश गराउने नगराउने बिषय प्रदेश सरकारको थिएन । तर पनि सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकार ले के गर्दैछ ,किन आफ्ना नागरिकलाई नेपाल ल्याउदैन ? सुदुरपश्चिम सरकार कहाँ हरायो भनेर सामाजिक सन्जालमा ब्यापक प्रदेश सरकारको खोजी भयो । संघिय सरकारको मातहतमा रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले केन्द्र सरकार सँग समन्वय गरेर गत बुधबार देखी लगातार नेपालीहरुलाई गौरीफण्टा नाकाबाट नेपाल प्रबेश गराउन थालेको छ ।
तर कोरोना चेकजांच बिना नै किन नेपाल भित्र्याउन थालियो भनेर अब अर्को आलोचना शुरु भएको छ । तर प्रदेश सरकारले किटको अभाबले चेकजांच गर्न नसकिएको बताउँदै आएको छ । प्रदेश सरकारले भारतबाट वा अन्य मुलुकबाट आएकाहरुको ब्यबस्थापन गर्न स्थानिय सरकारलाई बजेट पनि दिएको छ ।
प्रदेश सरकारका सामाजिक बिकासमन्त्री कृष्णराज सुबेदीले सोमबार धनगढीमा पत्रकारहरु सँग कुराकानी गर्दै सिमामा भिडभाड भएकाले चेक गर्न गार्हो हुने भएकाले अब सम्बन्धित स्थानिय तहको क्वारेनटाइनमा बसेकाहरुको ब्यबस्थित तवरले चेक गरिने बताए । 'प्रदेश सरकार जनता सँगै छ, बिरोध को लागी बिरोध नगरौ,' मन्त्री सुबेदीले भने - 'हामी स्वास्थ्य बिग्यहरुसँग सल्लाह गरिरहेका छौं, भिडभाडमा चेक गर्दा एकै दिनमा कोरोना पोजेटिभ निगेटिभ थाहा हुँदैन, अब क्वारेनटाइनमा चेक गर्छौँ।' मन्त्री सुबेदीले अहिले सिमानाकामा आएका नागरिकलाई प्रदेश सरकारले नै उद्दार गरिरहेको दाबी गरे ।
उनले प्रदेश सरकार कोरोना रोकथामको लागी र नागरिकको सुरक्षाको लागी सबै उपाए अपनाईरहेको बताए । सिमा नाकामा आएकाहरुलाई निजी क्षेत्रका ब्यक्ती र संघ संस्थाहरुले सिमामै पुगेर खाना, खाजा ,पानी लगाएत सहयोग गरिरहेका छन । आज देखी प्रदेश सरकारले पनि प्याकिङ गरेर खाना खुवाउने बताएको छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ १२, २०७७, १५:१७:००